सुत्केरी भएको कति दिनपछि यौन सम्पर्क राख्न मिल्छ ? - Mitho Khabar
June 19, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on सुत्केरी भएको कति दिनपछि यौन सम्पर्क राख्न मिल्छ ?
काठमाडौं – शिशुको जन्मपछि यौन सम्पर्क गर्दा वीर्य (शुक्रकीट योनीमा झर्दा )गर्भ रहन्छ कि रहँदैन ? तपाईंले भन्नु भए जस्तै धेरै दम्पतीको मनमा प्रश्न हुन्छ–शिशु जन्मिएपछि कहिलेदेखि यौन सम्पर्क पुनः शुरु गर्न हुन्छ रुगर्भमा शिशु रहने बित्तिकै महिलाको यौन जीवनमा फरक पर्ने हुँदा कतिपयले सोच्छन कि सधैका लागि उनीहरू यौनप्रतिको रुची हराएर जाने त होइन । त्यसो होइन, सुत्केरी भएको केही समयपछि उनीहरू सामान्य अवस्थामा आउँछन । तर यो कुरा बुझ्नु पर्छ की सामान्य अवस्थामा सुत्केरी भएपनि वा शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराइए पनि शरीरलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लाग्छ ।
प्रतिक्षा गर्नु उचित
चिकित्सकहरूका अनुसार बच्चा जन्माइ सकेपछि आमालाई ४ देखि ६ सातासम्म आरामको आवश्यकता पर्छ । तर समय महिलाको शारीरिक बनावट र स्वास्थ्य अवस्थामा भर पर्छ । पहिलो पटक आमा भएकाले यो जान्नु जरुरी हुन्छ की सुत्केरी भएको तुरुन्तै यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन । किनकी उनीहरूमा फेरि गर्भ बस्ने सम्भावना हुन्छ ।